Cristiano Ronaldo iyo Jose Mourinho oo kulan Gaaban yeeshay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiano Ronaldo iyo Jose Mourinho oo kulan Gaaban yeeshay
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho iyo Cristiano Ronaldo ayaa kulan ku yeeshay waddada loo maro qolka lebbiska oo ay ku qaateen wakhti wada-hadal ah markii loo baxayay wakhtiga nasashada ee ciyaartii Super Cup oo Real Madrid ay koobka ku qaaday 2-1.
Ronaldo oo qaybta hore kursiga kaydka fadhiyey ayaa markii la sii baxayay wakhtiga nasashada, waxa ay israaceen Mourinho oo iyaga oo gacmaha is haysta ay ka baxeen garoonka, taas oo sii kordhisay hadal-haynta ah in uu laacibka reer Portugal doonayo inuu ku biiro Manchester United.
Labadan nin ee isku waddanka ah ayaan isku wanaagsanayn wakhtigii ay wada joogeen Real Madrid, hase yeeshee, lunsi cashuur oo sababay in maxkamad la saaro, ayaa Ronaldo dabada ka riixaya, isla markaana u jiidaya dhinaca Manchester United oo uu tibaaxay inuu rabshad la’aan ku joogay.
Jose Mourinho ayaa u muuqda mid biyo qaboow ku shabaya qilaafkii ba.naa ee horay u soo dhex maray isaga iyo Xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo kaas oo dhawaan sheegay in uu ku laaban doono dalka England Gaar ahaan Manchester United oo uu aad u jecelyahay.
Wargeyska Marca eek a soo baxa dalka Spain ayaa daabacay in Jose Mourinho kala hadalay Ronaldo ku soo laabshada kooxdiisii hore ee Manchester United balse Cayaaryaahnka dalka Portugal ayaan jawaab waafi ah siin Macalinkiisii isaga oo jawaab ka dhigay dhoola cadayn oo kaliya.